Hogaamiyaha Alshabaab oo kahadlay dhibaatooyinka Kenya kasoo gaaray Duulaankii Soomaaliya |
Hogaamiyaha Alshabaab oo kahadlay dhibaatooyinka Kenya kasoo gaaray Duulaankii Soomaaliya
Hogaanka ugu sareeya Al-qaacidada Soomaaliya ayaa fariin maqal ah oo uu soo dhigay bogaga afka Shabaabka wax ku baahiya ayaa waxa uu uga hadlay dhibaatooyin badan oo soo gaaray dowlada Kenya iyo shacabka wadankaasi.
Sh.Abu Zubeyr hogaamiyaha Shabaab ayaa sheegay in Dagaalku iyadoo weli uu hada biloow yahay uu dadka Kenya dhaxalsiiyay Dhibaatooyin ay ka mid yihiin ammaan-darro joogta ah, Hoos u dhac dhaqaale, iyo Shaqo la’aan, kadib markii Dhaqaalihii wadanka loo leexiyay dhanka Dagaalka, waxaana uu intaas ku daray in dhibaatooyinka sugaya dadka Kenyaatiga ah ay intaas kasii weynyihiin.
Codka Abuu Zubey oo daqiiqado qaatay ayaa sidoo kale loogu diray digniin dowlada Kenya iyada oo algu yiri, “ Hadaad Nabad Dooneysiin, Kala baxa Ciidamadiina Dhulka Muslimiinta ee ay ku duuleen, Ogaadana inaan Nairobi iyo Mambasa Nabad lagu seexanaynin inta ay Ciidamadiinu ku jiraan gudaha Wilaayaat-ka Islaamiga ah” ayuu yiri Sh.Abu Zubeyr.
waxaa sidoo kale lagu soo hadal qaaday sida mustaqbalka Kenya uu kuxiranyahay shaqsiga ay u doordaan hogankooda, iyada oo lagu yiri, ” Taariikhda Kenya iyo Nolosha Bulshadeedu Weji Cusub ayeey geli doontaa kadib markii ay Duullaanka Gar-darrada ah kusoo qaadee Soomaaliya, Nooca ay yihiin Madaxda ay hada dooran doonaana iyo Aragtidooda Siyaasadeedna ay ku xirantahay qaabka uu noqonayo Mustaqbalka dadka Kenya iyo Ammaankooda”.
Abu Zubeyr ayaa fariintiisa ku sheegay in Ciidamada Kenya ay duullaan indha-la’aan ah kusoo qaadeen dhulka Shabaabku katalinayeen iyada oo ay Shabaabku horseed ka ahaayeen horumar dhaqaale iyo mid ammaan oo ay dadka Soomaaliyeed gaareen taas oo xitaa saamaysay wadanka Kenya kadib markii Burcaddii ay yaraatay isku socodka ganacsiguna uu kordhay, qaar badan oo ka mid ah Qaxootiga Soomaaliduna ay bilaabeen in ay Dalka Soomaaliya dib ugu soo laabtaan.